राष्ट्रपतिसँग अनुहार मिलेपछि गायकलाई सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध ! – " सुलभ खबर "
राष्ट्रपतिसँग अनुहार मिलेपछि गायकलाई सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध !
काठमाडौं। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंगसँग अनुहार मिलेपछि चिनियाँ ओ,पे,रा गायक लिउ केकिंगले सामाजिक संजालमा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको छ । लिउको अनुहार राष्ट्रपति सीसँग धेरै हदसम्म मिल्छ ।
यही कारण चीन सरकारले उनलाई सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । उनलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको अनुहारको फाइदा उठाउन सक्ने भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो । ६३ वर्षीय लिउलाई टिकटक भिडियो बनाउन पनि दिइएको छैन । चीनले कैयौं पटक आफ्ना राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठा बचाउनका लागि उठाएका कदमका कारण आलोचना खेप्नु परेको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार लिउ केकिंग जर्मनकिो बर्लिनमा बस्छन् । उनले लगातार टिकटक भिडियो बनाउँदै आइरहेका छन् । भिडियोमा उनी ओपेरा गाइरहेका देखिन्छन् । टिकटकमा उनका ४१ हजार फलोअर छन् । उनको टिकटक अकाउन्ट गएको एक वर्षमा कैयौं पटक बन्द गरिसकिएको छ । लिउले १० मेमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्नो अकाउन्ट बन्द गरिएको बताएका थिए । उनको टिकटक अकाउन्टमाथि इमेज भायोलेसनको आरोप लगाएर त्यसमाथि सेन्सर लगाइएको थियो ।
उनले आफूले चीन सरकारलाई आफ्नो पहिचान बताइसकेको र अकाउन्ट फेरि खुल्ने प्रतिक्षामा रहेको बताएका थिए । तर, उनको यो पछिल्लो भिडियोमाथि पनि सेन्सर लगाइयो र त्यो भिडियो पनि सामाजिक संजालबाट हटाइयो । लिउका अनुसार उनले नयाँ अकाउन्ट पनि बनाएका थिए तर त्यो पनि केही समयमै डिलिट गरियो ।